दुई कोरिया सडक तथा रेलमार्गबाट जोडिने
सियोल– आधुनिक उत्तर कोरियालाई सडक तथा रेलमार्गसँग जोडने महत्वकांक्षी योजनाको सुभारम्भ समारोहमा दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरु सहभागी भएका छन्। उक्त समारोह दुबै कोरियाली महाद्धीपबीच भएको संयुक्त नापजोखको एक साता पश्चात उत्तरकोरीयाको सीमावर्ती शहर केइसोङमा भएको...
संसद विघटनको निर्णय अवैधानिक : सर्वोच्च अदालत
कोलम्बो । श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेना मैत्रीपालाको कदम अवैधानिक भएको ठहर गरेको छ। अदालतले विहिबार आफ्नो फैसला सुनाउदै सिरिसेनाले गत महिना गरेको निर्णय अवैधानिक भएको जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका सात जना...
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज बुसको निधन
एजेन्सी । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज एच डब्लू बुसको निधन भएको छ । ९४ वर्षीय बुसको शुक्रबार मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यामहरुले खबर दिएका छन् । बुस सन १९८९ देखि १९९३ सम्म...
काबुल आक्रमणमा ११ नेपाली घाइते
काठमाडौं । अफगानिस्तानको काबुलमा भएको आक्रमणमा ११ नेपाली नागरिक घाइते भएका छन् । बुधबार भएको बेलायती सुरक्षा कम्पनी जीफोरएसको परिसरलाई लक्षित गरि भएको आक्रमणमा घाईते भएका व्यक्तिको परिवारलाई सूचित गरिएको सुरक्षा कम्पनी जीफोरएसले जनाएको छ...
संसद् बैठकमा कुटाकुट (भिडियो सहित)
एजेन्सी । श्रीलंकाको संसद्मा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे समर्थक र विरोधी सांसद्हरुबीच कुटाकुट भएको छ । बिहीबारको संसद् बैठकमा सांसद्हरुबीच भीडन्त भएको हो । संसद्ले ध्वनिमतको आधारमा प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेको विरोधमा...
कतार एयरवेजको विमान ट्याँकरमा ठोक्कियो !
एजेन्सी । एक सयभन्दा बढी यात्रु बोकेको कतार एयरवेजको विमानले कोलकाताको नेताजी सुभास चन्द्र बोस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेक्रममा पानीको ट्याँकरमा ठक्कर दिएको छ । कतार एयरवेजको क्युआर ५४० नम्बरको विमानले बिहीबार राति १ बजेर...
विश्वकै ठूलो एयरपोर्ट, जहाँ कामदार मात्रै २ लाख
इस्तानबुल । टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप ताइप इर्डोगानले हालै आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनाको एयरपोर्ट सम्पन्न गरेका छन् । टर्कीको स्तानबुलमा बनाइएको यो एयरपोर्ट विश्वकै ठूलो भएको बताइएको छ । ‘यो एक विमानस्थल इस्तानबुलको लागि मात्रै बनाइएको हैन,’ गत...
श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट : को हो प्रधानमन्त्री ?
कोलम्बो । श्रीलङ्कामा दुई नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्री दावी गरिरहेका बेला राष्ट्रपति र सभामुख फरक फरक कित्तामा देखिएका छन् । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाद्वारा अपदस्त गरिएका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई नै सभामुखले प्रधानमन्त्रीको रुपमा मान्यता दिएपछि राष्ट्रपति...
पोर्न फिल्म हेरे मृत्युदण्ड
एजेन्सी । केही समय अगाडि एउटा इन्स्टाग्राम पेजमा एउटा फोटो शेयर भएको छ जसमा लेखिएको थियो–उत्तर कोरियामा पोर्न फिल्म हेर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ परिए पोर्न फिल्म हेर्ने र बनाउने दुवैलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ ।’...
चिनियाँ सामानमा अमेरिकी कर
अमेरिकाले चीनसँगको व्यापार युद्धलाई झनै चर्काउने संकेत गर्दै २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको चिनियाँ सामानमा नयाँ कर लागाउने घोषणा गरेको छ  । हालसम्मकै ठूलो परिमाणका सामानमा लगाइएको अमेरिकी कर आगामी सेप्टेम्बर २४ देखि कार्यान्वयनमा...